Meizu weputara ndị were ọrụ were mechie ọtụtụ ụlọ ahịa na China | Gam akporosis
Meizu gbara ndị ọrụ n'ọrụ ma mechie ọtụtụ ụlọ ahịa na China
Meizu bụ ihe ọzọ ama onye na-eme na-adịghị ka a ga-eme nke ọma na ahịa dị ka onye ọ bụla ga-eche. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ike na-adịghị eme ka ihe ọjọọ-ma ọ bụ nso- dị ka HTC ee SonyCompanieslọ ọrụ abụọ na-anaghị enwe otu ewu ewu na ahịa dịka ha na-emebu, na-ahapụ ndị ọrụ ha ma mechie ụlọ ahịa na China, nke na-achọ ịmata ihe.
Ekpughere ihe ekwuru n'oge na-adịbeghị anya dị ka ihe dịka ịtụnanya. N'ezie, ika anaghị eme oke ihe ọjọọ, kama O yiri ka ọ naghị aghọrọ mkpụrụ dị ka o siri dị, ya mere a hụwo ya iji mee ihe ndị a.
Nkwupụta ahụ, na-ekwu maka ndị òtù Meizu, na-ekwu na Companylọ ọrụ ahụ ahapụla ihe karịrị 30% nke ndị ọrụ ya n'afọ a, ruo ugbu a, ma nweela ihe dịka otu puku ndị ọrụ. Meizu kwenyesiri ike na onye injinia ama ama nke ọma, Hong Hansheng, ahapụla ụlọ ọrụ China.
N'aka nke ọzọ, Meizu, nke na-akwalite onwe ya dị ka onye na-ama Huawei aka ma lekwasị anya n'ịgbasa ọnụnọ ya na offline, ọ dị ka ọ na-ala azụ. Companylọ ọrụ ahụ, nke nwere ihe karịrị ụlọ ahịa 2,700 na-anọghị n'ịntanetị na ọnụ ọgụgụ ya kachasị elu na 2016, ka hapụrụ naanị 5 ma ọ bụ 6 ụlọ ahịa dị otu a na mpaghara, nke metụtara.
Ihe niile na-egosi na Meizu chọrọ mgbanwe nke usoro, dịka ọ naghị edozi ụgbọ ala nke ọma na akụkụ ahụ, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, na ngwa ngwa, ebe ọ bụ na, ka ihe na-aga, ọ ga-emechi ụlọ ahịa ndị ọzọ n'oge na-adịghị anya, na-ebelata ndị ọrụ na, ya mere, na-ebelata ọnụnọ ya na ndị na-azụ ahịa.
Meizu ga-enwe igwe 5G mbụ ya na 2020
Ahịa ama bụ otu n'ime juputara taa. A na - ebi ya n'ọtụtụ ụdị - ọkachasị ndị China - ndị na - abawanye uru maka ego na asọmpi mpi ha, si otú a na - akpata, kwa afọ, ọnụ ahịa ọnụ ahịa ala. N'ezie, ndị isi na-emepụta ihe ga-adaba na ya, ihe na-adịghị mfe, na obere ma ọ bụrụ na ị ga-enye ndị ka mma ngwaọrụ ndị dị na tebụl.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Meizu gbara ndị ọrụ n'ọrụ ma mechie ọtụtụ ụlọ ahịa na China
Esi lee foto niile nke Samsung na ngwa Samsung Gallery
NVIDIA Lightspeed Studios na-ewepụta Pavilion: Ntinye Aka na Storelọ Ahịa Play